Walxo ka mid ah maddada lagu sumeeyay basaas hore oo Ruushka u dhashay oo la helay – WidhWidh Online
Warar soo baxay ayaa sheegaya in saraakiishii baarayay sumeyntii magaalada Salisbury ee dalka Britain loogu geystay basaas hore oo Ruushka u dhashay iyo gabadhiisa ay qaybo ka mid ah maaddada sunta ah ee loo adeegsaday ka heleen maqaayad biizada lagu iibiyo oo ay ka casheeyeen.
Maaddada lagu sumeeyay ayaa laga helay meel goonni ah oo ka mid ah makhaayadda, waxayna mas`uuliyiintu tilmaamayaan in aysan jirin wax caddaynaya in cid kale ay wax ku noqotay, Sergei Skripal iyo gabadhiisa, Yulia, waxay wax ka cuneen makhaayadda Zizzi Axaddii la soo dhaafay waxaana la helay labo saacadood kaddib iyagoo yaal kuraasta dushooda.
Makhaayadda Pizzeria waa mid ka mid ah shan meelood oo xuddun u ah baaritaanka, sidoo kale waxaa meelaha la baarayo ka mid ah gurigii Skripal iyo halkii lagu aasay xaaskiisa iyo cunuggiisa, xilli sii horreysay wasiirka arrimaha gudaha, Amber Rudd waxay sheegtay in baaritaanka booliska lagu ogaaday in ka badan labo boqol oo caddaymood. Waxay ammaantay xirfadda booliiska waxayna sheegtay inay ahayd mid xawli ku socotay.
Waxay sheegtay in dowladdu ay adeegsanayso ilo wareedyo badan si ay isugu daydo inay aqoonsaaan ciddii mas’uulka ka ahayd isku dayga dilka.
“Baaritaankaan waxaa diiradda lagu saaray sidii loo hubin lahaa in dadku ay nabad qabaan iyo sidoo kale inaan uruurinno dhammaan caddeymaha, sidaas darteed wax walba way kala caddaan doonaan”. Ayay tiri
Booliiska ayaa sidoo kale sheegay in cid kasta oo haysa caddaymo dheeraad ah ay soo dhoweynayaan mustaqbalka.
Ayadoo qayb ka ah baaritaanka, ku dhowaad 180 ka mid ah militariga ayaa la dhoobay Salisbury si meesha looga saaro gawaarida iyo waxyaabaha kale ee la rumaysan yahay in ay wasakhaysan yihiin.
Skripal waa 66 jir, waxay Raashiya ku eedeysay in uu ka gudbinayey xogo sir ah, balse dalka UK laga siiyay magan galyo sanadkii 2010, Raashiya way iska diidday ku lug lahaanshaha sumeynta ninkaan, dhanka kale xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka UK Boris Johnson ayaa sheegay in dalkiisu uu jawaab ka bixin doono haddii lagu helo in Moscow ay ku lug lahayd arrintan.
Jawaari Oo Bohol U Qoday Kheyre & Farmaajo Kuna Fadeexeeyey Beesha Caalamka
BIGNEWS: Rooboow Oo Ka Guuleystay Dawlada Dhexe & Murashaxnimadiisa Oo Loo Ogolaaday